Nri asaa ụdị nri Mexico ị kwesịrị ịnwale | Akụkọ Njem
Ikwu okwu banyere nri Mexico bu, na mbu, ikwu okwu banyere gastronomy nkewaputara dika Ihe omuma ndi mmadu nke mmadu site n'aka UNESCO. Ọnọdụ a ga-enye gị echiche banyere ịdị mkpa na ọgaranya nke Mexico n'ihe banyere nri ya na ihe kpatara anyị ji ewetara gị nhọrọ nhọrọ asaa a na-ahụkarị na Mexico ị na-agaghị echefu.
N’ezie, anyị na-eche otu n’ime ụdị nri dịgasị iche iche n’ụwa aka, ma na ihe oriri ya na n’ụdị nri ya dị iche iche. Anyị nwere ike ịsị na steeti ọ bụla na obodo ọbụla nwere kichin nke ya. Otú ọ dị, anyị ga-agwa gị banyere ụdị nri ndị Mexico na echiche zuru oke, ya bụ, nke ndị ahụ Ezi ntụziaka nile mba.
1 Ahụkarị nri Mexico: ntakịrị akụkọ ihe mere eme
2 Efere asaa mejupụtara ụdị nri Mexico
2.3 The ahumachi, ihe ọzọ kpochapụwo n'etiti ahụkarị nri Mexico
2.4 Obere obere Pibil
2.5 Escamoles na igurube
2.7 Na desserts: agwa swiiti
Ahụkarị nri Mexico: ntakịrị akụkọ ihe mere eme
Gastronomy Mexico ugbu a bụ nsonazụ nke njikọ nke mkpụrụedemede Columbian na ihe nketa Spanish. Afrika, Eshia, Middle East na ọbụlagodi mmetụta France agbakwunye na nke a. Site na pre-Hispanic ụwa o were ọtụtụ n'ime ya Efrata. Ọmụmaatụ, ọka, chili, agwa, tomato, ube bekee na ọtụtụ ngwa nri dị ka pápalo, epazote ma obu akwukwo nso.
Mana ha niile sonyeere ndị si Europe dịka ọka wit, osikapa, kọfị na ahihia oma dika n'ọnụ mmiri, cumin, oregano, spearmint ma ọ bụ coriander. Ọbụna ha na ndị Spain bịara anụ dị ka anụ ezi ma ọ bụ ọkụkọ y mkpụrụ osisi dị ka oroma, lemon ma ọ bụ banana.
Dị ka anyị gwara gị, nsonaazụ nke ihe a niile bụ nri ejiri mara iche iche n'etiti steeti dị iche iche mejupụtara obodo Aztek. Ọ bụghị otu ihe ahụ iji kwuo banyere gastronomy nke Baja California karịa ikwu banyere Chiapas n'onwe ya. Ma ụdị nri Mexico niile na-enwekarị isi. Anyị nwere ike ikwu na ya niile dabere na ihe ndị dị ka ọka, chili na agwa, nakwa na ụfọdụ usoro nri na egwuregwu.
Efere asaa mejupụtara ụdị nri Mexico
Recipesdị usoro nri dị iche iche mejupụtara nri ndị Mexico na-eme ka ọ ghara ikwe anyị omume ịchịkọta ha n'otu isiokwu. Ya mere, anyị na-aga ilekwasị anya na asaa ahụkarị efere na i nwere ike ịhụ na mpaghara ọ bụla nke mba, si Sonora elu Veracruz (anyị hapụrụ gị a bụ onye ndu obodo a) na site Jalisco elu Quintana Roo. Ya mere, anyị ga-ewetara gị nkwenye gastronomic anyị sitere na Mexico.
Tacos nke tacos
Ma eleghị anya, ha bụ efere ahụ kasị ewu ewu nke Mexico, ruo n'ókè na ha agafeela ókèala ya ma taa enwere ike ịchọta ebe ọ bụla n'ụwa. Ha dị oke mkpa na nri obodo nke ndị mmadụ mepụtara set nkebi ahịrịokwu soro ha. Dịka ọmụmaatụ, "ịtụba taco" bụ otu ihe na ịga iri nri ma ọ bụ "na enweghị ịhụnanya, ụfọdụ tacos al pastọ."
N'ụzọ na-akpali mmasị, ụzọ ị ga-esi sie ike ịkwadebe. Ọ bụ ihe ọka ma ọ bụ ọka wit ntụ ọka nke etinye ihe n’ime ya. Na kpọmkwem ebe a bara uru nke tacos n'ihi na, dabere na ihe ha nwere n'ime, ha na-ebute ọtụtụ efere dị iche iche ma nye ha aha dị iche iche. Mana abụọ n'ime ewu ewu bụ:
Tacos nke tacos. Anyị ekwuola ha, mana ugbu a anyị ga-agwa gị ihe ha mejupụtara. Nọmalị, njuputa ya bụ anụ ezi, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike ịbụ anụ. A kwadebere marinade a na ngwa nri, achiote na ala uhie. A na-etinyekwa yabasị, painiapulu na coriander, yana ọtụtụ ụdị efere.
Tacos ọla edo. N'aka ha, a na-eji anụ ọkụkọ shred, agwa na poteto emeju ihe ahụ. Nke a bụ etu esi ghee ha wee ghee chiiz, letus na ihendori. N'ebe ụfọdụ, a na-eri ha so eso akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ofe ọkụkọ nke a na-etinye ha n'ime ya.
Burritos, ndị ochie n'etiti ụdị nri Mexico
Ọ bụ ezie na enwere ike ịtụle usoro nri ndị ọzọ, ha ka dị nri tacos nke ngwaahịa di iche iche. A na-eme ha ụdị anụ, ose, yabasị na chili. Na mgbakwunye, ha na-esokarị agwa refried na ihe ndozi ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ banyere achondu. Ha bu achicha oka, n’agbanyeghi na ihe di iche na nke ha bu na chiiz bu otu n’ime imeju ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwaa anwa ịnwa ihe mbụ, jụọ maka nke ahụ, na mgbakwunye na ihe ndị ọdịnala, na-ebu ifuru ugu.
The ahumachi, ihe ọzọ kpochapụwo n'etiti ahụkarị nri Mexico
Na mba Aztek, ụdị ihendori ọ bụla ejiri ya chili, ose na ngwa nri ndị ọzọ na-anabata aha ahumachi. Site na nke a na-enweta ihe ejiri ube oyibo na akwụkwọ nri ndị ahụ. Dị ka ị chere, anyị kwuru banyere ya guacamole, ikekwe ihe kachasị ama ama na Mexico na mpụga oke ala ya. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na ọ malitere tupu oge Columbian na nke ahụ, maka ndị Mayan, ọ nwere akara ngosi agụụ.
Otú ọ dị, n'oge a, a na-akpọ ụdị ihe oriri dị iche iche nke sitere na nri ndị Mexico. O bu ya ka ejiri chili ose na mmanu ndi ozo, ma o nwere nke chocolatey anya. Site na ndọtị, a na-akpọ ya anụ ma ọ bụ ihe oriri na-esi nri nke ejiri ihendori a mee.
Ọ bụ ezie na steeti ọ bụla nwere usoro nke ha, nke a kacha nwee ekele na Mexico bụ moolu poblano. Ya mere ewu ewu ọ na-aghọ na, kwa afọ, ọ na-eme ememe na Puebla un ememme raara nye ihendori a. Ejiri otutu chili ose, tomato, yabasị, galik, chocolate na ocha di iche iche me ya. Ọ bụrụ na ịnwale ya, ị gaghị enwe mmechuihu.
Obere obere Pibil
Akwụkwọ mpịakọta Cochinita
Pibil bụ okwu Mayan nke eji zoo nri ọ bụla edobere na a oven ụwa. Nke a mara dị ka pib ma nke ahụ bụ ebe aha efere a si. Na mbụ, ọ bụ ewu ewu na Ala mmiri Yucatan, ala dị oké ọnụ ahịa ebe ị nwere ike ịga na ihe anyị na-akwado n'isiokwu a. Mana ọ gbasaala na Mexico niile na ụwa niile.
Ọ na-agụnye Anụ ezi marinated na achiote, ihe na-esi ísì ụtọ nke a na-ejikwa tupu oge Columbian. Mgbe ahụ, a na-etinye ya na oven ụwa ma ọ bụ nke yiri ya na yabasị na-acha odo odo, ose habanero na oroma oroma. A na-etinye ihe niile a na banana banana iji gbochie ya ihichapụ ma hapụ ya ka ọ sie nri n'abalị.
N’ụzọ ezi uche dị na ya, anaghịzị esi nri n’ụdị ọdịnala dị otu a, mana ọ ka dịkwa ụtọ. Maka ihendori, ọ bụghị naanị achiote na-etinye aka, oregano, cumin, mmanụ oliv, mmanya na ihe ọ orangeụ orangeụ oroma n'onwe ya.
Escamoles na igurube
Anyị na-etinye efere a n'etiti ụdị nri Mexico n'ihi na ọ bụ akụkụ ya, mana anyị na-adọ gị aka ntị na, ikekwe, ịchọghị ịnwale ya. Ihe mere bu ihe di nfe. Ndị escamoles bụ okwute ndanda larvae a na-eri na obodo Aztek kemgbe oge Columbian. Ọ bụrụ na anyị agwa gị na a na-akpọkwa ha "Caviar nke Mexico", ị nwere ike ịchọta otu esi ekele ha. A na-erikarị ha eghe ma soro nsen na ngwa nri dị ka epazote.
Maka akụkụ ya, anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ banyere ụkpara. Ọ bụ ihe obere igurube A na-erikwa ha eghe, ọbụlagodi dị ka aperitif ma ọ bụ na tacos na quesadillas. N'ọnọdụ ọ bụla, a na-akwado ha abụọ maka iji obi ike.
Nke a na-akpa ike usu Ọ gụnyere, na mgbakwunye na ofe, ọka ọka nke cacahuazintle dịgasị iche iche, ọkụkọ ma ọ bụ anụ ezi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'ime ndị a, dịka ọmụmaatụ, yabasị, letus, kabeeji, radish, ube oyibo, cheese ma ọ bụ rinds anụ ezi.
Ma ọ bụ na ị nwere ike ịchọta onwe gị ọtụtụ ụdị pozole. Kaosiladị, ha niile daba ụzọ abụọ: the Blanco, dị mfe n'ihi na ọ bụ naanị ọka na anụ na oseose, ịkọwapụta nke ọma na nke ahụ nwere ike ịnwe ezigbo ụtọ.
Anyị ga-achọkwa maka mbido ya tupu oge ndị Spain. N’ezie, aha ya si na Nawatụl tlapozonalli, nke putara "sie" ma obu "onwunwu", obu ezie na echiche ndi ozo na egosi na o sitere na ya polisi, okwu sitere na asụsụ Cahita nwere ike ịtụgharị dị ka "ọka esi nri."
Na desserts: agwa swiiti
Anyị enweghị ike ịkwụsị njem anyị na-ahụkarị nri ndị Mexico na-enweghị ikwu maka desserts. Fọdụ dabara na ndị anyị ma na obodo anyị. Ọ bụghị n'efu, anyị ekwuolarịrị na nri Mexico nwere ngwa ngwa Hispanic siri ike. Ọ bụ ikpe nke Churros, nke osikapa puddingnke fritt ma ọ bụ jerikal, yiri nke anyị.
Agbanyeghị, desser ndị ọzọ bụ ezigbo ụmụ amaala. Otu n'ime ha bụ agwa swiiti, ngwaahịa nke dị na gastronomy nke mba Aztek. Emere ya na mmiri ara ehi, nkochi ime akwa, pawuda, shuga, almọnd anuahade, walnuts na ọka ọka, na mgbakwunye, n'ụzọ ezi uche dị na ya site na agwa esi nri na-enweghị nnu.
Ma ha na-ewu ewu kwa levers, ụdị achicha nke eji mmiri, mmanụ a honeyụ, obere pean na butter a kwadebere. Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ gbasara nwa sapote, onye ihe ndabere ya bu nkpuru osisi a na akpo nke ya na akwa, cinnamon na sugar tinyere ihe ndi ozo. Ya ekpomeekpo bụ nnọọ ịmata, ijuanya yiri nke chocolate. N'ikpeazụ, anyị na-akwado ndị ọka bred ma ọ bụ ọka ọhụrụ dị na mbido. Iji mee ya ụtọ, o nwere mmiri ara ehi na sinamọn tinyere ya na ihe ndị ọzọ dịka akwa, bọta na ntụ ọka. Nanị ụtọ.
Na mmechi, anyị agwala gị banyere nri asaa nke mejupụtara nke nri ahụkarị nke Mexico. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịgụnye ndị ọzọ dịka wayo ofe, ndị na-ewu ewu tamalenke achịcha tortilla ma ọ bụ anwu. Gaba ma nwaa ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » 7 ụdị nri Mexico nke ị kwesịrị ịnwale
Obodo kacha mma na Spanish iji ụgbọ ala gaa na mmiri